एजेन्सी, १३ असार । गत मंगलबार योगगुरु रामदेवले ‘कोरोनिल ट्याबलेट’ र ‘श्वासारी वटी’ औषधि सार्वजनिक गरे । उक्त औषधिबाट कोरोना भाइरसको उपचार सत् प्रतिशत सम्भव हुने उनको दाबी थियो ।
पतञ्जलीले सो औषधिको क्लिनिकल परीक्षण पनि भएको र बिमारीहरुमा यसको सकरात्मक असर पनि देखिएको दाबी गरेको थियो । तर औषधि सार्वजनिक भएको केही समयमा नै भारतको आयुष मन्त्रालयले यसको प्रचारप्रसार र बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाई दियो ।
साथै मन्त्रालयले पतञ्जली आर्युवेद लिमिटेडसँग औषधिको पुरै नाम बताउन र त्यसको निर्माणमा प्रयोग भएका सामाग्रीहरुको जानकारी दिन पनि निर्देशन थियो ।
साथै मन्त्रालयले नमूना साइज, औषधिको परीक्षण भएको ल्याब वा अस्पताल र आचार समितिको स्विकृति समेत धेरै जानकारीको माग गर्‍यो । आयुष मन्त्रालय बाहेक भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान आईसीएमआरले पनि त्यस्तो कुनै पनि औषधि जानकारी नभएको बतायो ।
पतञ्जलीको भनाई के छ ?
तर ती सबै कारबाही पछि पतञ्जली आयुर्वेद लिमिटेडका अध्यक्ष तथा रामदेवका साथी आयार्य बालकृष्णले औषधि सम्बन्धि सबै जानकारी आयुष मन्त्रालयलाई दिएको बतायो । बालकृष्णले यो मामिलामा राम्रो सञ्चार नभएको बताएका छन् ।
उनले परीक्षणका सबै मानकहरु औषधि निर्माणको काममा अप्नाएको समेत जानकारी दिए ।
बालकृष्णले आफ्नो ट्वीटमा भनेका छन्, ‘पतञ्जलीले कोरोनाका लागि क्लिनिकल परीक्षण पुर्ण हुन अघि कोरोनिल ट्याबलेटलाई चिकित्सकीय वा कानुनी रुपमा कोरोनाको औषधि भनेको छैन ।’
यस्तै रामदेवले कोरोना भाइरसको औषधि उक्त किटलाई दोहोरो स्तरमा परीक्षण गर्दा खरो उत्रिएपछि तयार गरेको बताए । उनले औषधि बनाउनु अघि क्लिनिकल कन्ट्रोलको पनि अध्ययन गरिएको र फेरी क्लिनिकल कन्ट्रोल ट्रायल पनि गरिएको बताए ।
कहाँ भयो कोरोनिलको परीक्षण ?
पतञ्जलीले उक्त औषधिको परीक्षण जयपूरस्थित नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्स निम्स अस्पतालमा भएको दावी गरेको छ । त्यसकै सिलसिलामा राजस्थान सरकारले निम्सलाई सूचना जारी गर्दै परीक्षणको बारेमा जानकारी माग गरेको थियो । तर राज्यसरकारले अर्को सूचना जारी गर्दै सरकारलाई अस्पतालबाट परीक्षणको कुनै जानकारी नआएको बतायो ।
यस्तै अस्पतालका अध्यक्ष बीएस तोमरले पनि पतञ्जली र रामदेवको दावीलाई गलत भएको बताए । उनका अनुसार पतञ्जलीले प्रतिरक्ष प्रणाली मजबूत बनाउने औषधिको रुपमा अश्वगन्धा, गिलाये र तुलसीको प्रयोग गरेको थियो तर त्यो कुनै औषधि होइन ।
तोमरले सो औषधि तयार गर्न संस्थाले कुनै सहयोग नदिएको बताए पनि कोरोनिक सार्वजनिक गर्दा तोमर पनि उपस्थित भएको धेरैले बताएका छन् ।
इम्युनिटी बुस्टरका लागि पाएको थियो लाइसेन्स बनायो औषधि
केन्द्र सरकारले औषधिको प्रचार प्रसारमा प्रतिबन्ध लागू गर्दै त्यसबारेमा उत्तराखण्डको राज्य सरकारसँग प्रश्न पनि गरेको छ । जवाफमा प्रदेश सरकारले पतञ्जलीलाई इम्युनिटी बुस्टरको बनाउन अनुमति मात्र दिएको स्पष्टिकरण दिएको छ । तर पतञ्जलीले किन औषधिको किट बनायो र विज्ञापन किन गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर बिस्तारै खोजिनेछ । राज्यको आयुष विभागले पनि कम्पनीलाई त्यसको नोटिस पठाएको छ ।
तर एउटा दुविधाको स्थिति पैदा भएको छ । यसबीच पतञ्जली कम्पनी लगातार आफूले औषधिको परीक्षण कागजात राज्य सरकारलाई बुझाएको दाबी गर्दै आईरहेको छ । तर कोरोनिलको क्लिनिकल परीक्षण पुरा भइसकेको छैन । सो परीक्षण पुरा भईसकेको हो वा हैन भन्ने विषयमा पनि केही स्पष्ट भएको छैन ।
पतञ्जलीको यो औषधिमाथि राजस्थान र महाराष्ट्र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
पतञ्जलीको अनुसार यसरी काम गर्छ कोरोनिलले
औषधिलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा रामदेवले उक्त औषधिलाई आयुर्वेदिक जडी बुँटीहरुबाट मात्र तयार गरिएको बताएका थिए । त्यसमा मुलैठी, गिलोय, अश्वगन्धा, तुलसी, श्वासारीको प्रयोग गरिएको छ । रामदेवका अनुसार गिलोयमा पाइने टिनोस्पोराइड र अश्वगन्धमा पाइने एन्टी ब्याक्टेरियल तत्व र श्वासारीको रसको प्रयोग गरेर सो औषधिको निर्माण गरिएको हो ।
पतञ्जलीले उक्त औषधिले संक्रमितको प्रतिरोधि क्षमता बढाउने र कोरोना संक्रमणको चेनलाई तोडिदिने दावी गरेको थियो ।
बीबीसीको एउटा रिपोर्ट अनुसार कुनै पनि औषधि विकास गर्न, त्यसको क्लिनिकल परीक्षण पुरा गर्न र त्यसलाई बजारमा लगेर काम सुरु गर्न कम्तिमा तीन वर्ष लाग्छ । कहिलेँकाही विशेष परिस्थितिमा छिटो हुँदा पनि १० महिना देखि एक वर्षको समय लाग्दछ ।